Silicon Carbide Chinhu, Silicon Carbide Hita - SICTECH
Zvigadzirwa zvedu zvave zvichishandiswa zvakanyanya mukupisa kwekurapa maindasitiri akadai segirazi, zvigadzirwa, magineti zvinhu, hupfu hwesimbi, uye zvakatumirwa kune nyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu epasi.
Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co, Ltd. yakavambwa muna 2001, isu tinonyanya kugadzira tembiricha yepamusoro-yesilic carbide kudziyisa zvinhu, Kubva patakagadzira, isu tanga tichigadzira zvigadzirwa zvepamusoro-soro uye zvemhando yepamusoro nemweya wekuenderera mutsva. 2006, isu takabatana pamwe neSilicon Carbide Materials Research Institute yekuvandudza zvinhu zvitsva zvesilicon carbide kudziyisa zvinhu, ndokutora chishandiso chitsva chekugadzira uye indasitiri yazvino yekugadzira tekinoroji, iyo SICTECH brand silicon carbide yekudziya zvinhu zvakagadzirwa nesu zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi.
Isu tanga tichigadzira zvigadzirwa zvepamusoro-soro uye zvemhando yepamusoro nemweya wekuenderera mutsva.
SICTECH inopa akasiyana maratidziro emhando yepamusoro yesilicon carbide kudziyisa zvinhu: GD (yakatwasuka tsvimbo) mhando, HGD (yakakwira diki yakatwasuka tsvimbo) mhando, U mhando, W (matatu chikamu) mhando, LD (imwechete tambo) mhando, LS (yakapetwa kaviri ) mhando nezvimwe zvigadzirwa.
W mhando (nhatu nhanho) yesilicon carbide kudziyisa el ...
LD mhando (isina zononoka) yesilicon carbide kudziyisa ...
Kubva November 1 kusvika 3, 2019, wechinomwe Taizhou International Electrothermal Technology uye Equipment Exhibition rakaitirwa Taizhou International Expo Center. Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. yakakokwa kuti itore mu ...
Kana gonhi remhando yesilicon kabhoni yekudzivirira rakasiyana, kana iwo akateedzana kuramba kweiyo yakakwira silicon kabhoni tsvimbo mutoro iri yakanyanyisa kukosheswa, zviri nyore kukonzera kukurumidza kuwedzera kuramba kwesilicon kabhoni tsvimbo, kupfupisa hupenyu hwebasa. Nesilicon carbide iri kazhinji akatevedzana, yakafanana con ...